| | ကမ္ဘောဒီးယား နိုင်ငံ ဆီယံယိဒ် နိုင်ငံတကာ လေဆိပ်သို့ ဧပြီ ၁၄ ရက် က ရောက်လာသည့် ထိုင်း ၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်း မစ္စတာ သက်ဆင် (ဓာတ်ပုံ – Reuters)
ထိုင်းနိုင်ငံ လိပ်ကျွန်း လူသတ်မှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မြန်မာတချို့ ရိုက်နှက် စစ်ဆေးခံရထိုင်းနိုင်ငံသို့ တရားဝင် ရောက်ရှိနေသည့် မြန်မာအလုပ်သမား ၁၀၀ ကျော်ကို မဲဆောက်သို့ ပြန်ပို့ကလေးငယ် ထောင်ချီ၍ ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ဖမ်းဆီးခံထားရလူသန်ကြီးများတွင် အဖြေမရှိပါအာဏာသိမ်း ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဦးဆောင်သည့် ထိုင်း အစိုးရသစ် ဖွဲ့စည်း
People November 9, 2012 - 8:06 pm Thein Sein invite again Criminal PM. so very very bad thinking.
Reply Burmann November 9, 2012 - 8:11 pm How we believe that kind of PM
Reply မင်းမျိုးနုိုင် November 10, 2012 - 9:25 am သက်ဆင်သည် လောလောဆယ်တွင် ဘယ်နိုင်ငံ၊ ဘယ်အဖွဲ့အစည်းကို ကိုယ်စားပြုသူဖြစ်ပါ
Reply tinzawhtoo November 10, 2012 - 4:00 pm အိပ်ငိုက်နေတာများပါတယ်
Reply ဘုံမိ November 12, 2012 - 11:25 pm ထက်ဆင် ထိုင်းနိုင်ငံကငွေတွေ ဘယ်လိုခိုးခဲ့တယ်ဆိုတာ သိန်းစိန်းသိခြင်ပါ
Reply sit min November 20, 2012 - 6:02 pm ဘာတွေရှောက်ရေးနေကြတာလဲ။